XOG CUSUB: M/weyne Farmaajo oo ku Gacan seyray Dalab uga yimid Dowlada Qatar | jubbaland news
XOG CUSUB: M/weyne Farmaajo oo ku Gacan seyray Dalab uga yimid Dowlada Qatar
Xogtan ay so gudbiyeen Saraakiil ka tirsan Madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegeysa in Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu diiday Casuumaad deg deg ah uu ka helay Dowlada Qatar.
Dowlada Qatar oo lacago Malaayiin ah siisay dowlada Soomaaliya si aan xiriirka loogu jarin ayaa dooneysay inay dalkeeda ku casuunto mar kale Madaxweyne Farmaajo si ay u sii xoojiyaan xiriirka hada kala dhaxeeya iyo in dhinac looga soo jeesto sida Qatar ay rabto Xulafada Sacuudiga.
Ilo wareedyada Madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegaya in Farmaajo uu ka biyo diiday safar xiligaan xiisada ay ka jirto Khaliijka uu ku tago Qatar oo la Go’doomiyay.
Agaasimaha Guud ee Madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Fahad Yaasiin ayaa horboodayay qorshaha Madaxweynaha Soomaaliya uu ku tagayo Qatar, balse lataliyayaasha Farmaajo ayaa ku gacan seyray codsigaasi.
Fahad Yaasiin waa wakiilka dowlada Qatar ee dalka Soomaaliya wuxuuna tan iyo intii xasarada khaliijka jirtay uu isku dayay in xiriirka loo jaro sacuudiga iyo Imaaraadka wallow dowlada Soomaaliya ay qaadatay Go’aan dhex dhexaadnimo ah.
Sacuudida ayaa qaaday dhowr talaabo oo lagu cadaadinayo Somalia tan iyo markii wasiirka arimaha dibada Qatar uu yimid Muqdisho kulamana Madaxtooyada Soomaaliya kula qaatay Farmaajo iyo Kheyre, waxaana si toos ah u xumaan lahaa xiriirka Sacuudiga iyo Imaaraadka ay la leeyihiin Dowlada Soomaaliya hadii Madaxweyne Farmaajo uu aqbali lahaa safarkaasi Qatar ay dooneysay inay kaga faa’iideysato danaheeda gaarka ah.